Abukar Arman: Isbaddalka loo bogay lagana dabadhacay ee Geeska Afrika – Radio Daljir
Agoosto 17, 2018 6:51 g 1
RW Abiy Axmed iyo Madaxweyne Iseeyas Afewerki oo is marxabaynaya kaddib saxiixii heshiiska Nabadda iyo Saaxiibtinimada. Sawir qaade: Yemane Gebremeskel 2018 via Wikimedia Commons
Abukar Arman waxa uu qormadaan ku iftiiminayaa, kuna falaanqaynayaa isbaddalka siyaasadeed ee xawliga ku socda ee ka hanaqaaday Geeska Afrika.
Isbaddalka siyaasadeed ee ka hanaqaaday Geeska Afrika waa mid la dhihi karo waa filanwaagii aan la saadaalin ee qarnigan 21aad illaa iyo hadda.Waa mar e Itoobiya ma ay dumin oo iskuma ay jabin, waa mar kale e taariikhda markii ugu horraysay waxaa la magacaabay Raysal Wasaare ka soojeeda qowmiyadda Oromada, oo magac Islaam wata, lehna dhaqan iyo dhaxal Islaam, asaga oo isla markiiba dhameeyey colaad 20 sano jirsatay oo ka dhex aloosaneyd Itoobiya iyo Eriteriya. Saas oo xaal yahay, Abiy Axmed, Raysal Wasaaraha laga dabadhacay ee ahaan jirey sirdoonka dalka, weli cagta dhulka toos ulama helin oo meel kasta waxaa hortaal caqabadaha ku salaysan qowmiyadaha dalka iyo siyaasadahooda kaladuwan ee midba midda kale riixayso. Dagaalka marmar ka dhex dillaaca qowmiyadaha Oramada iyo kan shidaalku buux dhaafshay ee gobolka Soomaalida waa hordhac aan kheyr qabin iyo ifafaalayaasha dhibka badan ee horyaal RW Abiy Axmed.
Jirtaayo intaas, hadana lama yareysan karo guusha istaraatajiyadeed iyo hormarka dhanka nabadda iyo kan dhaqaalaha ee suurtagalka noqon kara haddii isbaddal uu hanaqaado. Sidoo kale waxaa iyana guul weyn oo maskaxeed iyo mid qalbiba ah heshiiska Itoobiya iyo Eriteriya oo suurtagaliyey in qoysas iyo saaxiibo kala dhumay ay mar kale is helaan. Saas oo xaal yahay dhanka istaraatajiyada iyo waliba dhanka qorsheynta siyaasadda, hadana waa lama huraan haddii kale waa doqonimo in aan la is weydiin hawsha cidda riixaysa, cidda ka danbeysa, waxa dhib iyo dheef dabasocda, iyo waliba saameynta ay ku yeelan karto dal kasta oo gobolka ah.
War kuma seegana e illaa iyo hadda waxaan maqalnay hadalo tuur-tuur ah oo aan macne buuxa wadan, laakiin aad loogu bogay, lalana wada dhacay, oo sacab iyo durbaan loo tumay. Wax bayaamin ah warkeeda daa iyo meesha loo socdo; kee iyo waxee baa waxan wata oo yaa ka danbeeya, maxaa se sababaya degdegga intaas le’eg? Kollayba degdegsiinyo waa jiraa, laakiin haddii aad gaariga xawaare sare ku cayriso, waa lama huraan in aad isteerinka gacanta ku hayso, indhahana aadan marnana jidka ka weecin.
Haddana aan u soo laabano gunta isbaddalka. Siyaasaddu ma leh fal aan la qorsheyn iyo isbaddal cir-ka-soo-dhac ah; siiba laba dowladood oo col ah, cadowtinimo raagteyna ay u dhexeyso, juquraafiga siyaasadeynsana colaadda qayb ka yahay. Tartanka siyaasadeed ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha oo dhinac ah iyo iyo Sacuudiga/Imaaraadka iyo Turki/Qadar oo dhinaca kale ah waxa uu abuuray xiisad daran, waaba haddii uusan shideyn oo afuufeyn colaado haddeer socda.
Sidaas darteed annaga oo miyir kaashaneyna, caqliga saliimka ahi waxa uu na farayaa in aynaan rumeysan dhacda walba iyo sida looga sheekeeyo.
Istaraatajiyad Saddex-Geesood ah oo Mug Weyn
Shiinaha oo tartan adag oo juqufaariga-siyaasadeysan kula jira Mareykanka waxa uu tartiib-tartiib Mareykanka uga sii riixanayaa Jabuuti, meesha xukuumadda Madaxweyne Trump weli laga la’yahay siyaasad la fahmi karo oo ku aaddan Geeska Afrika. Halkaas oo xaal marayo baa hadana maanta Shiinaha oo muujinaya cududdiisa milateri ee sii kobcaysa, waxa uu faraha ku hayaa dhismaha saldhig ciidan kii ugu horreeyey ee uu ka dhisto dal shisheeye. Ogoow oo Shiinuhu mar hore buu qaaradda Afrika dhidbaha uga taagay xiriir ganacsi iyo mid hormarineedba. Kobcinta kaabayaasha dhaqaale iyo garab-istaagga siyaasadeed ee uu Shiinuhu la garabtaaganyahay mashruuciisa dhaqaale kobcinta ee loo yaqaan Jidka Xariirta (Silk Road) asna waa mid saldhigtay, hawshiisuna ay haddeerba socoto. Dhanka kale, Mareykanka oo in ka badan 70 dal ku leh ku dhawaad 800 oo saldhig milateri, dhaqdhaqaaqa iyo isballaarinta Shiinuhu, siiba qaaradda Afrika, waxa ay Mareykanka ku keentay jaahwareer istaraatajiyadeed iyo dhakofaar dhaliyey dheelitir la’aan.
Saas oo xaal yahay, AFRICOM weli waa xafiiska sabaynaya ee Arrimaha Dibadda masuulna ka ah danaha dowladda Mareykanka, ayadoo lala kaashanayo gaarhayayaashii hore – waa Itoobiya oo dhanka siyaasadda horgale ka ah iyo Erick Price (Blackwater) iyo xiriirkiisa ku milan Imaaraadka Carabta (UAE) iyo DP World oo u xilsaaran wax kasta oo aan lala rabin xisaabtan iyo u kuurgal. Haddaba haddii aadan awal u-war-hayn haddeerba ogoow sababta dal aad u yar oo yaal Khaliijka Carbeed uu u noqday maqaarsaar loo maro juquraafi-siyaasadeedka geyigaas iyo waliba dib-u-naqshadeynta lala damacsanyahay Gacanka Carbeed iyo Geeska Afrika.
Inkasta oo Imaaraadku isku dayo in uu muujiyo waji ganacsi oo caalami ah oo hanaqaaday, haddana gancsigiisa badda iyo intaas oo shirkadood oo aan la hubin ganacsigooda waxaa dul heehabaya daruuro shaki. Shakigu intaas kaliya ma aha e sababo la xiriira khataraha ammuurahaas iyo siro dahsoon dartood ayaa sannadkii 2006 waxa uu baarlamaanka Mareykanku diidey dalabkii DP World ay ku rabtay in lix dakadood oo Mareykanka ku yaal ay kula wareegto. Diidmadaas qayaxan ee barlamaanka ayaa timid ayada oo DP World ay haysato taageerada kooxda dagaal-ogayaasha u badan (neoconservatives) oo uu ugu horreeyey Madaxweyne Kuxigeen Dick Cheney.
Marinka Badda Cas ee Baab al-Mandab sannadkii waxaa mara ganacsi lagu qiyaasay $700 bilyan una dhexeeya Yurub iyo Aasiya, Yurubna waxaa ka sii go’an in ay joojiso mujaahiriinta Afrika ayada oo dhiirigelinaysa maalgashi, xoojineysana is-dhexgalka gobolka si loo siyaadiyo ganacsiga, loona helo ammaan iyo maamul wanaag. Itoobiya ayaa hawshaas baroosin u ah, IGAD oo haysata aqoonsi caalami ah ayana waa hay’addii dowliga ahayd ee loo mari lahaa fulinta mashruuca. Sawirka laga helo qaabka loo mareeyo Geeska Afrika waa kii lagu dabakhi lahaa Afrika oo dhan. Laakiin hal mid oo yar ka digtoonoow: Turkiga maya, Qadar iska illoow, Shiinaha asna warkiisa haba soo qaadin.
Tan iyo intii uu dillaacay khilaafkii waddamada Khaliijku sannad kahor, kaas oo sababay in Qadar xannibaad bad iyo berri ah la saaro, siyaasadda iyo ammaanka Geeska Afrika ma aheyn sidii lagu yiqiin. Siiba Soomaaliya ayey saameyn gooni ah ku yeelatay, oo waxaa biloowday tartan ku saleysan juquraafiga-siyaasadeysan, kaas oo Imaaraadka iyo Sacuudiga isku gacan ka dhigay, meesha Qadar iyo Turkiguna gacmaha isqabsadeen. In kasta oo ay badanyihiin tartamada ku-cuney-ama-ku-ciideeyey ee dalka ka aloosan, haddana lacagta boqortooyooyinka Khaliijku ay ku daadsheen siyaasadda kala-fur-furka ee Soomaaliya ma soo marin mid ka tiro badani.
Janaraal Anwar Eshki waa Guddoomiyaha Xarunta Bariga Dhexe ee Daraasaadka Sharciga iyo Istaraatajiyada, waana lataliye ka agdhow Amiir Maxamed bin Salmaan, dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudiga, hadana haya talada dalka. Janaraalku waa hal-abuuraha istaraatajiyadda Sacuudiga ee dagaalka lagu hoobtay ee Yemen; waa ninka ka danbeeya isusoodhaweynta iyo xiriirka Sacuudiga iyo Israa’iil, hadde waa Israa’iisha xasuuqa ba’an ku haysa dadka reer Falastiin; Janaraalku waa kan abaabulaya siyaasadda fududeynaysa in Itoobiya ay si sahlan Soomaaliya ula wareegto, Soomaaliyana kamid noqoto Itoobiya.
Khudbad uu ka jeediyey Golaha Xiriirka Dibadda ee Mareykanka (Council on Foreign Relations), Janaraalku waxa uu dhawaan soo bandhigay qorshe uu ugu yeeray “Geeska Afrika ha la hoos geeyo hoggaanka Itoobiya (Unifying the Horn of Africa under the leadership of Ethiopia)” hana la isku xiro Geeska Afrika iyo Gacanka Carbeed, ayada oo la dhisayo loona marayo Buundada al-Nuur “waxaa la dhisayaa buundo isku xirta magaalada al-Nour ee Jabuuti iyo magaalada Al-Nuur ee Yemen.” Janaraalku waxa uu si cad oo aan meermeerin laheyn dhegaystayaashiisa ugu sheegay in uu afka Ingiriiska ku hadlo laakiin lagula taliyey, asaga oo taladaas aan u bogin, in uu khudbadiisa ku akhriyo afka Carabiga, una jeediyo dhegaystayaashiisa. Hadaba su’aal maanta taagan baa waxa ay tahay, Janaraalku ma waxa uu akhriyey nuqulkii koowaad ee qabyo-qoraal istaraatajiyadda Sacuudiga ee gobolka mise saaxiibo kale buu gacanta u haadinayey?
Isbaddal Abuurkiisa aad loo Sahlay
Bartamihii bishii Juun, markii Shiikh Maxamed bin Zayed uu booqday Itoobiya, Hay’adda Hormarinta Abu Dhabi waxa ay Bangiga Dhexe ee Itoobiya ku shubtay lacag dhan $3.7 billion – waa lacag le’eg maalgashiga Turkiga ee Itoobiya. Maalinkii xigey, Raysal Wasaaraha Itoobiya waxa uu u duulay Muqdisho. Saddex saacadood gudahood asaga oo gegida diyaaradaha Adan Cadde aan gees uga bixin, RW Itoobiya waxa uu Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, la saxiixday heshiis Itoobiya iyo saaxiibadeed gadaal ka fadhiya farta ka saaraya wixii la raadinayey – Afarta dekedood ee ugu istaraatajiyeysan Soomaaliya, Badda Cas illaa iyo Badda Hindiya. Illeen kaash baa boqor ah e, Imaaraadku dhib badan kalama kulmin in uu la wareego dhowr dekedood oo ku yaal Soomaaliya, Ereteriya iyo Suudaan.
Bishii xigtay booqashadii Soomaaliya kabacdi, RW cusub ee Itoobiya waxa uu booqday Eriteriya, lana kulmay Madaxweyne Iseeyas Afwerki. Isla maalinkaas, labadii cadow ee awal aan wajigooda la is tusi jirin waxa ay wada saxiixeen heshiis nabadeed oo isla markiisa soo celiyey xiriirkii dibloomaasi ee labada dal, waxaana la isla gartay in dib loo soo celiyo duulimaadyadii labada dal iyo waliba Itoobiya oo biloowda isticmaalka dekedda Ereteriya.
War laguma deeqsiin karo e isla asbuuc gudihiis, Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka degay Casmara si uu ula kulmo Madaxweyne Iseeyas una soo celiyo xiriirkii dibloomaasi ee Soomaaliya iyo Eriteriya. Eriteriya oo awal ahayd “Waqooyiga Kuuriya ee Afrika” waxa ay gelin gudihiis ku noqotay meel aan la huri karin oo mudan in la soo taabto. Waddamada kale ee IGAD xubnaha ka ah ayana safka waa ku soo jiraan, walloow Eriteriya ay weli xayiraad rasmi ahi saarantahay. War lagama xiiso dhaco e, xayiraaddii saarneyd Eriteriya ee ay awalba Itoobiya aliftay, adduunkana war-aan-jirin ka dhaadhicisay, si siyaasadda gurracan ee Itoobiya ay garab ugu noqoto, baa hal mar Madaxweyne Farmaajo waxa uu la soo booday, una sheegay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay in Eriteriya xannibaadda laga qaado. Hadalka Farmaajo ee aan laga fiirsan fajiciso Jabuuti kaliya kuma uu noqon, laakiin waxa uu kiciyey shacabkii Soomaaliyeed oo awalba aan mooganeyn sida uu Farmaajo u liicay, asaga oo dowladdiisa loo arkay mid uun u adeegta hormarinta siyaasadaha iyo danaha shisheeye oo kaliya.
Qorshaha Turkiga ka Tuur Soomaaliya ma Suurtagal baa?
Tan iyo kadoonkii Gu’gii carabta, dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudigu waxa ay maleegayeen istaraatajiyad ujeedadeedu tahay kala-tuurka iyo kala-cayrinta ururka Akhwaanu Muslimiinka, sababtuna tahay awoodda siyaasadeed iyo tan bulsho ee uu ururka ku dhex leeyahay shacabka, iyo waliba adeegga baahsan ee ay bulshada u hayaan. Boqortooyooyinka Khaliijku waxa ay ururka iyo kor-u-kaca awoodda iyo saameynta Turkiga ee Islaamka dhexdiisa iyo Bariga Dhexe u arkaan khatarta ugu weyn ee hortaagan kuxunkooda inta la noolyahay.
Sidaas darteed markii Turkigu ay Soomaaliya sannadkii 2011 ka bilaabeen olole weyn oo tabbarucaad bani-aadamnimo iyo mid hormarineed ah, ayna Soomaaliya la askumeen iskaashi istaraatajiyadeed, Imaaraadka Carabtu waa isa soo xaadiriyey si uu u burburiyo iskaashiga cusub ee Turkiga iyo Soomaaliya. Imaaraadku intaas kuma uusan joojin e waxa uu Muqdisho ka dhistay safaarad aad u baaxad weyn oo labaysa Turkiga. Waxa ay fureen Cisbitaalka Shiikh Sayid si uu ula tartamo Cisbitaalka Erdogan ee Turkigu u dhisay Soomaaliya. Markii Turkigu bilaabay in uu bixiyo iskoolarshiib, tababarana siiyo saraakiisha ciidamada Soomaaliya, Imaaraadku waxa ay jeebabaka u buuxinayeen calooshooda-u-shaqaystayaal loo xilsaaray hawlo sireed oo gooni ah oo aan Soomaali ka warhayn. Waxaa kale oo Imaaraadku tababareen koox milateri ah oo ay dhawaan meel cidla ah uga dhaqaaqeen, hubkoodiina isla meeshii lagu bililiqaystay.
Turkigu, in kasta oo Qadar ay isku xulufo yihiin, hadana waa mid saaran miisaan kaas ka duwan. Afgambigii dhicisoobay kabacdi, Turkiga oo Soomaaliya kaashanaya waxa uu dalka ka tirtirey dhadhaqaaqa Gulen iyo wixii shakhsiyaad iyo hay’ado ku xirnaa oo dhan. Saas oo siyaasadda gudaha Turkigu ay tahay, haddana nidaamka Turkigu waa qaabka ugu roon oo la dhihi karo waa dahabi ee dowlado isku kaashadaan, dalna dib loogu dhiso, hormarna loogu horseedo. Hormarka la taaban karo ee Turkigu ka muujiyey Soomaaliya iyo sida uu gacmaha uga laabtay howlaha hoose ee Soomaalida waxa ay markhaati ma doonto u tahay, ifkana u soo saartay sida caawimaadda caalamiga ahi ay u tahay mid isdabamarsan, sumeysan, oo musuqmaasuq ku dhisan. Dhanka Qadar, inkasta oo markii hore aysan Imaaradka waxba ka duwaneyn, markii danbe saaxiga ayey keentay waxa ayna ku dayatay qaabka Turkiga, ayada oo maalgalineysa dhismayaasha jidadka iyo halboowlayaasha muhiimka u ah kaabayaasha dhaqaale ee dalka.
Aamin laakiin Xaqiiji
Intaas oo isbaddal ah oo isdabajooga, Itoobiya weli waa mid leh “dano badan oo isburinaya, burin karana danaha muhiimka ee Mareykanka” una janjeeri karta dhanka Shiinaha oo uu ka dhexeeyo xiriir dhaqaale oo isku dhafan. Haddaba ma lagaa yaabaa in Abi Axmed uu yahay kii dhabarka tusi lahaa Shiinaha iyo Turkiga oo balaayiin doolar Itoobiya maalgashaday? Haddii la dareemo wax sansaan ah oo tilmaameysa in Abiy Axmed “uu furfurayo wixii shaqeynayey asaga oo u hanqal-taagaya waxa laga yaabo in ay shaqeeyaan” waxa ay sababi kartaa in hormuudka dalku ay ka horyimaadaan Abiy Axmed, taasina ay gobolka ka abuurto dib-u-dhac iyo gaabis horleh. Haddii intaas kore aysan walaac abuurin, Soomaaliya, Jabuuti iyo xataa Eriteriya mid walbaa waxa uu leeyahay dano u gaar ah oo lid isku ah.
Waxaas oo dano gaar ah oo lid isku wada ah, si loo helo dheelitir siman, lana isaga jiro dulinka iyo gooryaanka juquraafiga-siyaasadeysan, Soomaaliya waa in ay dalbato in ciidamada Itoobiya iyo Kenyan ee qayb ka ah hawgalka AMISOM ay degdeg Soomaaliya uga baxaan, sidoo kale waa in dalka laga saaro dhammaan ciidamada gobolada Soomaaliya si sharci darro ah ku jooga. Waxaa kuu soo haray UNSOM, ilaaliyaha danaha shirkadda Ingiriiska ee Soma Oil and Gas, waa in ayana albaabada la isugu laabo.
Eriteriya ayana waxa ay xaq u leedahay in ay dalbato in IGAD baddal loo helo – in la helo hay’ad goboleed si daacad ah looga wada xaajooday oo xubin kastaa leedahay cod siman, xarunteeduna aysan Itoobiya ahayn.
Geeska Afrika waa suuq soo koraya lehna ifafaalo dhaqaale oo mug weyn. Laakiin si ifafaalahaas looga dhigo mid wata hormar dhaqaale, keenana nabad waarta, waa in siyaasiyiinta gobolku, ganacsatada, aqoonyahanka iyo hammiga hormuudka bulsho ay yihiin kuwo isla jaanqaada: waa in aysan noqon mid awood shisheeye ama gaashaanbuur isku dan ah jeebka u gala.
Sidaas darteed, bulshada Geeska Afrika waa in aysan u afduubnaan naceyb soojireen ah ama aragtida gaaban iyo hammiga musuqmaasuq ee hoggamiyayaashooda siyaasadda. Waxaa la gaaray waqtigii lala imaan lahaa fikir mug weyn, laakiin ka maran faduul. Dal kasta waa in uu marka hore dib isugu laabto oo xal u helo dhibkiisa u goonida ah, lana helo dib-u-heshiisiin dhab ah.
Waa lagamamaarmaan in dal kasta uu yimaado isu-tagga iyo midoowga la sheegayo ee gobolka ka socda asaga oo xor ah oo miyir qaba.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 486 Wararka 22990
Maqaalka Abukar Arman ee Isbaddelka loo bogay lagana dabadhacay ee Geeska Afrika oo kaalinta #1 ka galay maqaaladii lagu daabacay @AfricaAtLSE ee sannadka 2018 | Arlaadi 2 years ago
[…] Link-an kasii akhriso Abukar Arman: Isbaddalka loo bogay lagana dabadhacay ee Geeska Afrika […]